Archive du 20181024
Brickaville, Fenoarivo Atsinanana, Mananara Avaratra,… Vonon-kampandresy an’i Dada
Tao amin’ny Faritra Atsinanana, dia i Brickaville, Miarinarivo, Vavatenina, Fenoarivo Atsinanana, Mananara Avaratra,… no nanohizan’ny kandida faha-25 Marc Ravalomanana fampielezan-kevitra omaly talata 23 oktobra.
Fiatrehana ny fifidianana Tapafetraka ny fepetra, hoy ny SADC
Midina an-tsehatra manara-maso ny fizotry ny fifidianana mba ho lavorary sy mangarahara ny vahiny ankehitriny. Raha ny fantatra, mankasitraka ny fikarakarana ny eo anivon`ny SADC satria efa tafapetraka avokoa ny fepetra amin`izao.
Hetsika fanorenana ifotony Namaky bantsilana ny tsy fahatomombanan’ny fifidianana
Niverenan-drizareo avy eo anivon’ny hetsika fanorenana ifotony na HFI tetsy Antaninandro omaly ny tantaram-pirenena ka antony mahatonga an-drizareo hitaky fa tsy maintsy hiverenana sokafana ny lisim-pifidianana.
Propagandin-dRajoelina Nahafaty olona indray
Fiara tsy mataho-dalana mpanao propagandy indray no nandona nahafaty mpitaingina bisikileta tao Andrebakely Sud Alaotra omaly tolakandro tokony ho tamin'ny 3ora.
Kandida 26 hivory eny Ivato Mikasa hanangana tetezamita…
Hivory eny amin’ny CCI Ivato ireo kandida 26 mitaky ny fanemorana ny fifidianana anio alarobia 24 oktobra raha tsy misy ny fiovana.
Fandehanana mifidy Sahia mijoro sy mandray andraikitra !
Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao dia tsara ny mampahatsiahy fa zo sy adidy ny mifidy. Amin’ny maha zo azy dia ny olona voasazy ihany no tsy mahazo mifidy, na ny olona izay heverina fa tsy manana fahefana ara-tsaina hanao izany.
Atahorana mafy Ravalomanana Horesena amin’ny hala-bato ?
Mivoaka ny resaka ankehitriny fa hokotrehina hararaka amin’ny alalan’ny hala-bato sy ny kajikajy maloto samihafa ny kandida Marc Ravalomanana laharana faha-25 satria atahorana mafy.
Fanesorana an-daharana kandidà Tena ho sahy ve ny HCC ?
Ny lalàna dia mamaritra fa mandritra ny fe-potoan’ny fifidianana, ka tafiditra amin`izany ny fampielezan-kevitra, dia tsy azon` ny olon-tsotra na kandidà atao ny mitsipaka na manaratsy ireo sampan’asa misahana ny raharaham-pifidianana sy ny zotram-pifidianana.
Rehefa Ravalo no filoha Hovana ny lalàmpanorenana
Mipetrapetraka ny fanarenana ny firenena amin’ny endriny rehetra ho an’i Marc Ravalomanana na ara-drafitra na ara-politika na ara-toekarena na ara-piarahamonina …
Ravalomanana tany Analanjirofo Resy lahatra ny rehetra
Faly nahatsidika ireo toerana tena saro-dalana tao amin’ny faritra Analanjirofo ao amin’ny faritanin’i Toamasina toa an’i Sahambala, Miarinarivo aho , hoy i Marc Ravalomanana omaly;
Eny ho’aho vahoaka mifoha amin’izao Hitanao tsara izay efa natsangany Hitanao ihany ny hanao sy tsy hanao Hitanao foana Ravalo no sangany !
Ligin’ny Baolina kitra any Bongolava Mbola i Dr Dezy no lany ho filoha
I Dr Dezy na Rakotoarimino Andrianina Desire filoha teo aloha ihany no lany ho filoha vaovaon’ny ligim-paritry ny baolina kitra any Bongolava.
Vava efa zatra mandainga…
Na ireo vonona sy mikofokofoka amin’ny propagandy na ireo misalasala sy miketrika mafy ny hisian’ny fampiatoana ny fifidianana dia samy hotsarain’ny karatra eo amin’ny 7 novambra,
Taksibe mihazo an’i Ivato Hiakatra 600 Ar ny saran-dalana amin’ny 01 novambra
Toy ireo taksibe rehetra miasa eto an-drenivohitra sy ny manodidina dia hampiakatra ny saran-dalany ho 600 Ar ny taksibe mampitohy an’Ivato sy Vassacos manomboka amin’ny 01 novambra ho avy izao.
Mpianatra mitokona ao Barikadimy Mitaky ny fialan’ny filohan’ny oniversiten’i Toamasina
Efa ho roa herinandro izao no nitokona ireo mpianatra ao amin’ny oniversiten’i Toamasina. Mpianatra ao amin’ny taona fahatelo sy fahefatra manaraka ny lalam-piofanana toekarena no nanomboka ny hetsika raha tsiahivina izay nampian’ireo departemanta hafa tosika taty aoriana.
Salon de la rentrée universitaire Hanampy ny mpianatra amin’ny fiatrehany ny hoaviny
Hotanterahina manomboka rahampitso alakamisy eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka, haharitra roa andro, ilay hetsika « Salon de la rentrée universitaire » amin’ity taona 2018 ity.
Fizakan-tena ara-bola Hitondra fampandrosoana ara-toekarena
Anisan’ny singa iray hahatongavana amin’ny fampandrosoana ara-toekarena ny fizakan-tena ara-bolan’ny firenena iray.
Kila tsy nisy noraisina intsony ilay orinasa mpanao kidoro tao amin’ny fokontany Mazava-Huile, ao Mahajanga ny alatsinainy hariva teo.
Mbola ho lavitra ezaka ny famahana ny olana mikasika ny fitaterana eto Antananarivo.
Disadisam-pianakaviana Notsatohany lefona ny rafozany
Tranga mampalahelo sady mampivarahontsana no nitranga noho ny disadisa nisy teo amina fianakaviana iray.
Trafikana sokatra 10 196 tany Toliara Nampaneno lakolosy ny WWF sy ny TSA
Ny 9 aprily 2018 no nahatrarana zana-tsokatra miisa 10.196 tany Betsinjaka tany Toliara II, izay maro no niandry ny tohin’ny raharaha, ary omaly no fotoana nomena fa hiakarany fampanoavana.